वारेन्टी नीति - शेन्जेन Jiasheng डाटा टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।
2. हामी खानी अधिकारीसँग सहकार्य गर्छौं, बिक्री पछि समस्याहरू, तपाईंले माइनिङ मेसिन ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
3. ब्रान्ड-नयाँ माइनर मेसिन र पावर कर्डको लागि एक वर्षको वारेन्टी।
4. खानीको मूल्य अग्रिम सूचना वा क्षतिपूर्ति बिना बजार उतार-चढ़ाव अनुसार बारम्बार समायोजन गर्नुपर्छ;
5. वारेन्टी अवधि पछि, खानीहरू भाग र श्रमको लागतमा मर्मत गर्न सकिन्छ।
निम्न घटनाहरूले वारेन्टी रद्द गर्नेछ:
1. ग्राहकले हामीबाट अनुमति नलिइकन आफैले कुनै पनि कम्पोनेन्टहरू हटाउँछ/बदल्छ।
2. खानी/बोर्ड/कम्पोनेन्टहरू पानी डुब्ने/जंग वा भिजेको वातावरणबाट क्षतिग्रस्त।
3. खुला सर्किट बोर्ड वा कम्पोनेन्टहरू पानी र चिसोको कारणले गर्दा क्षरण।
4. कम गुणस्तरको बिजुली आपूर्तिको कारणले गर्दा क्षति।
5. ह्यास बोर्ड वा चिप्स मा जलेको भागहरु।
सामान्यतया, हामी तपाईलाई के चाहानुहुन्छ प्राप्त गर्न ब्रान्डेड खानी स्रोतहरू प्रदान गर्दछौं।आधिकारिक अभंग प्याकेजबाट खनन उपकरण।
फ्यूचर्स खानी वारेन्टी नीति
फ्यूचर उत्पादनहरू ब्रान्ड निर्माताद्वारा वहन गरिनेछ, अन्तिम सामानहरू ब्रान्डको आधिकारिक स्थितिमा निर्भर गर्दछ।सामान्य Hashrate र शक्ति खपत परिवर्तन आधिकारिक रूपमा पालना गर्नुहोस्।यदि आधिकारिकबाट फिर्ती छ भने, हामी ग्राहकलाई उही समयमा फिर्ता गर्नेछौं।
फ्यूचर सम्बन्धी सबै मुद्दाहरू निर्माता द्वारा वहन गरिनेछ,अन्ततः निर्माताको वास्तविक स्थितिको अधीनमा।
प्रयोग गरिएको खानी वारेन्टी नीति
1. तपाईंको खरिद गर्नु अघि, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि सबै प्रयोग गरिएका खानीहरूका लागि हामी रेकर्डिङ समयको साथ परीक्षण भिडियोहरू प्रदान गर्नेछौं।(प्रयोग गरिएको खानी विवरण: सामान्य ह्याशरेट थ/से±10% PWR खपत W±10%)
2. खनन बजार मूल्य उतार-चढ़ावको कारणले गर्दा, हामी तपाईंको भुक्तानी पछि फिर्ता र फिर्तीहरू स्वीकार गर्दैनौं।
3. प्रयोग गरिएका ब्रान्डेड खानीहरू मर्मत गर्न सकिन्छ, पार्टपुर्जा र श्रमको शुल्क लगाइनेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको खरिद गर्नु अघि कुनै भ्रम छ भने, हामी तपाइँलाई मद्दत गर्न के गर्न सक्छौं भनेर हामीलाई थाहा दिन प्रतिक्रिया पेश गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।